Sary voalohany avy amin'ny sarimihetsika Killers of the Flower Moon nataon'i Martin Scorsese | Avy amin'ny mac aho
Tetikasa manaraka nataon'i Martin Scorsese, Mpamono ny volana voninkazo, hanao premiere irery amin'ny Apple TV +, taorian'ny fifanarahana nifanaovana tamin'i Scorsese sy ny orinasam-pamokarana Leonardo DiCaprio. Vantany vao vita ny mpilalao ary napetraka indray ny andraikitra, nanomboka ny fanaovana sary ary efa manana ny sary voalohany isika.
Taorian'ny fanomanana herintaona mahery, ny vaovao voalohany momba ity sarimihetsika ity dia ny volana martsa 2020, farany azontsika ny sary voalohany amin'ity sarimihetsika Scorsese vaovao ity, sary mampiseho an'i Leonardo DiCaprio amin'ny maha Ernest Burkhart ary Lily Gladstone amin'ny vadiny, Mollie.
- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) Enga anie 10, 2021
Ity sary ity dia nozarain'i DiCaprio tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter-ny (Via Vaovao Osage). Lily gladstone nanatevin-daharana ny mpilalao sarimihetsika tamin'ny volana febroary lasa teo, miaraka amin'i Jesse plemons amin'ny maha-maso FBI ahy izay hanatanteraka ny fanadihadiana ny famonoana ireo karana Osage manankarena.
Ity sarimihetsika ity, izay ankoatry ny talen'i Scorsese dia mpanatontosa ihany koa miorina amin'ny boky eponymous nosoratan'ny mpanoratra David Grann. Ankoatra an'i Leonardo DiCaprio, iray amin'ireo kintana Hollywood lehibe miseho amin'ity sarimihetsika vaovao ity koa i Robert DeNiro.
Mpamono ny volana voninkazo dia natsangana tamin'ny 1920, ary ny Birao Federaly Fikarohana (FBI) vao noforonina dia manadihady ny famonoana ireo karana Osage manankarena ireo izay nahazo alalana fanofana ny solika hita ambanin'ny taniny.
Mbola aloha loatra ny fahalalana inona no mety ho daty famoahana an'ity sarimihetsika vaovao ity?Saingy, azo inoana fa hahatratra ny sinema sy Apple TV + alohan'ny faran'ny taona izy ity mba hifaninana amin'ny Oscars of the Academy of Hollywood amin'ny taona ho avy, amin'ny andiany faha-94.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Sary voalohany avy amin'ny sarimihetsika Killers of the Flower Moon an'i Martin Scorsese
Herinandro fitsapana eo amin'ny Epic Games sy Apple. Famintinana ny zava-mitranga